China-ezimilise welding ucingo wocingo welding ngenxa yezakhiwo zokwakha yoMvelisi kunye noMthengisi | Pro kocingo
E-ezimilise ngentsimbi ucingo wocingo olubiyele lwezakhiwo zokwakha
Ucingo olucingo olu-L olwenziwe nge-L luqhele ukusetyenziswa njengocingo lokwakha, unokulufumana kwindawo yokuhlala, izakhiwo zorhwebo, iindawo zokupaka. Kukwashushu ukuthengisa ucingo lokhuseleko kwimakethi ye-APCA.
Inkqubo yemveliso yocingo lwentsimbi ebunjiweyo engu-L iyafana nakwezinye izinto ezibiyelweyo. It is a ucingo sentsimbi usebenzisa steel wire welding kunye kuqala kwaye okwesibini kufuneka ukugoba umatshini ukwenza L ezimilise phezulu nasezantsi kocingo. Okokugqibela, uyigqibile ngengubo yomgubo. Amandla aphakamileyo kunye nocingo oluqinileyo lwecingo kunye nokubukeka okuhle.
I-PRO.FENCE ibonelela ngocingo olumilise olumilise i-L kumngcelele wetekhnoloji yokutshiza nge-electrostatic kunye nomgangatho ophezulu wempahla yomgubo "Akson" Yenza ucingo lwethu lulunge ngokuchasene nokubola, kwaye inombala omhle. Sicebisa umbala wombala omnyama nomnyama omnyama nawo othandwayo kwintengiso yethu. Iyahambelana nezakhiwo zorhwebo. Ubume obuthambileyo kunye nombala zinokuhambelana nendawo ezingqongileyo zezakhiwo kakuhle.
Ifreyim ebunjiweyo ye-L ebiyelweyo ihlala ihlanganiswe ngeposi kwaye ifuna isiseko sekhonkrithi. Ihlala isetyenziswa njengokhuseleko nocingo lwezakhiwo zorhwebo, izindlu zokuhlala, indawo zokupaka.
Ucingo lweDia: 2.5-4.0mm
Enemingxuma: 60 × 120mm / 60 × 150mm
Ubungakanani bePaneli: H500-2500mm × W2000-2500mm
Iposi: 30 × 40 × 1.5mm
Izixhobo: i-SUS 304
Kugqityiwe: Powder Camera (Mnyama, Mhlophe, Mhlophe, Luhlaza, Mthubi, Ngwevu)
1) Ukujonga okutsalayo
Ubume obugudileyo be-L egobile ngaphezulu kocingo ngaphandle kweengcebiso ezibukhali zocingo, kwaye umbala othulisiweyo unokuhombisa izakhiwo zakho.
Yenziwe ngoxinzelelo oluphezulu locingo lwentsimbi kwaye uyigqibe ngokugcwalisa ipowder ngokupheleleyo yenza ukuba olu cingo lomelele ngakumbi kwaye lukhusele umhlwa kunye nomhlwa.
3) Ixabiso elifanelekileyo
Indlela ethe ngqo yokufaka isithuba esinye iya kulifinyeza ixesha lokwakha kwaye igcine iindleko zabasebenzi ngokunjalo.
Into NO.: PRO-10 Ixesha Lead: 15-21 DAYS Imveliso Orgin: CHINA
Egqithileyo C-ezimilise Powder Camera welding enemingxuma Fence Kuba Power Izityalo
Okulandelayo: Itroli esindayo yomthwalo onzima wokuhambisa izinto kunye nokugcinwa, 3 macala S
358 ucingo High umnatha wocingo for iintolongo a ...